သင်က Winstrol အွန်လိုင်းဝယ်ယူခြင်းမပြုမီသိထားပါဖို့လိုထိပ်တန်း 15 Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများ
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/သငျသညျယ်ယူရန် Winstrol အွန်လိုင်းခင်မှာကိုသိရန်လိုအပ်ထိပ်တန်း 15 Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများ
အပေါ် Posted 01 / 17 / 2019 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
1 ။ Winstrol ကဘာလဲ?2။ Winstrol ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ,
3 ။ ကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းအတွက်ထိပ်တန်း 15 Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများ4။ Winstrol သောက်သုံးသော
5 ။ Winstrol တစ်ဝက်ဘဝ6။ Winstrol ထောက်လှမ်းအချိန်
7 ။ Winstrol Cycle 8 ။ Winstrol Post ကို Cycle ကုသမှု
9 ။ ဘယ်လို Long ကဒါဟာ Winstrol ရလဒ်များကိုကြည့်ပါရန်ကိုယူပါသလား 10 ။ ဘုံ Winstrol ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
11 ။ Winstrol ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုကိုရှောင်ရှားဖို့ကိုဘယ်လို 12 ။ Winstrol Contraindications
13 ။ Winstrol အွန်လိုင်း Buy လုပ်နည်း 14 ။ Winstrol Powder ကြော်
ဟို steroids သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုခုတ်လှဲရန်ရှာနေနှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကြွက်သားထုထည်ဆက်ပြီးအခါသေချာအရာမှန်သလော ဒါကြောင့် (Winstrol) Steroid တစ်မျိုး, အခြား steroids ကျော်ပြုလုပ်ထားပြီးအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်မည်သို့ stanozolol အပေါ်ဘဏ်လုပ်ငန်းမှာထိုက်သည်ဆိုပါကရှာဖွေတွေ့ရှိ winstrol ဝယ်ဖို့.
သငျသညျအဆီကိုမီးမရှို့နဲ့ပိန်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုရှိချင်လျှင်, သင်ကအားကစားခန်းမမှ subscribe နှင့်အချို့သောဒြပ်ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်သည်။ ရန်တစ်ခုတည်းသောသေချာလမ်း ဝိတ်ကျ လျှင်မြန်စွာ, အများဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည်, ရရှိသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်ကြွက်သားထုထည်တစ်ခု Steroid တစ်မျိုးဖြည့်စွက်ယူခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်သူ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအကျိုးကျေးဇူးများထင်ရှားသောသည်အခြား steroids မတူဘဲ, winstrol အသုံးပြုသူအများအပြားအားသာချက်ရှိပါတယ်။ ကြောင်းသင်သိသင့်၏တစ်ခုမှာပိုပြီးအရာကများလွန်းအချို့ကုထုံးအသုံးပြုမှုရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။
1. Winstrol ကဘာလဲ?
ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်မီ, သငျသညျသက်ဆိုင်သောအများအပြားမေးခွန်းများကိုမေးကြလိမ့်မယ် "ဘာ winstrol နှင့်အဘယ်သို့ပြုသနည်း?" ကောင်းပြီ, ဒီဆောင်းပါးကိုသင်သိလိုထက်ပိုပြီးမိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။
Winstrol သို့မဟုတ် Stanozolol တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဒြပ် steroids ဟိုနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ဂုဏ်သတ္တိများနှစ်ဦးစလုံးအတူ။ ယင်း၏ကုန်ကြမ်း form မှာ, ဒီအော်ဂဲနစ်ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကိုမ CAS သမုတ်သော။ 10418-03-8။ Stanozolol dihydrotestosterone (DHT) မှဆင်းသက်လာ။ ဖွဲ့စည်းရေးဖြစ်စဉ်ကို hydrazine နှင့်အတူ oxymetholone ၏ 3-keto-aldehyde condensing ပါဝငျသညျ။
Winstrol ဖြစ်စေရရှိနိုင်ကာပါးစပ်သို့မဟုတ်ထိုးဆေးမူးယစ်ဆေးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာပရိုတိန်းပေါင်းစပ်စတင်များနှင့်ကြွက်သားကြီးထွားအရှိန်မြှင့်ခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။ အပြင်လူအများစုတစ်ဖျက်စီးပေမယ့်ပုလ်ကောင်အောင်မြင်ရန်ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာကာလအတွင်းကသီးနှံများကိုပုံ။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးယူအက်စ်အေ FDA ကအပါအဝင်နိုင်ငံအများစုအတွက်တားမြစ်သည်တစ်လူတန်းစား III ကိုပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်ကက်တလောက်သိရသည်။
ဟိုဂုဏ်သတ္တိများပြနေသော်လည်း winstrol လည်းအချို့ကုထုံးအသုံးပြုမှုပါတယ်။ ဥပမာ, ကကြွက်သား-ဖြုန်းရောဂါများကိုကုသဟေမိုဂလိုဘင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း, angioedema များ၏ကုသမှုပေးနိုင်သည်။ stanozolol စစ်မှန်သောဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းအောက်မှာသာရရှိနိုင်ပေမယ့်, သင်ဆဲရှာတှေ့နိုငျ ရောင်းရန် Winstrol အများဆုံးအွန်လိုင်းစတိုး၌တည်၏။
ဒါဟာမူးယစ်ဆေး testosterone ဟော်မုန်းနှိုင်းယှဉ်ပါကသုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဟိုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး C17-alpha-alkylated Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ခြင်း, အ stanazolol dihydrotestosterone ဟော်မုန်းများ၏ပြုပြင်မွမ်းမံကနေရရှိလာတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖွဲ့စည်းရေးရှိပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ပစ္စည်းဥစ္စာကအန်ဒရိုဂျင်ထက် 10x ဟိုဖြစ်ပါတယ်။
ဟို rating 320 100
အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 30 100
Winstrol ပထမဦးဆုံး 1959 အတွက်ဖြစ်တည်မှုသို့ရောက်ကြ၏။ ဝင်သရော့ဖ် Labs ကသွေးပြန်ကြောနှင့် terminal ကိုကြွက်သားများအခြေအနေများကုသ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူကတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုစွမ်းရည်ကြောင့်ကြွက်သားပိန်အခြေအနေများအဘို့အညာဘက်ကိုညွှန်းပါစေ။ 1962 အသုံးပြုပုံကြောင့်ပြီးသားအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည်ခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကို Winstrol ကျော်ကြားလုပ်က 1980s အိုလံပစ်စဉ်အတွင်းခဲ့ doping အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ငါရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ သူ 1988M ပြိုင်ပွဲများတွင်ထိပ်ဆုံးအခါ 100 အားကစားသမားများတွင်ဘင်ဂျွန်ဆင်ဟာရွှေတံဆိပ်ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာထူးချွန်အမေရိကန်အိုလံပစ်, သူ Carl Lewis ကရိုက်နှက်သဖြင့်အသစ်တစ်ခုကိုစံချိန်တင်ထားကြ၏။
တစ်ဦးအောငျပှဲ, ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Sprinter ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းဂျွန်ဆင်သည်သူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန် Stanozolol ကိုအသုံးပြုတော်မူပြီးမှအဘို့အ busted ခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အားအာဏာပိုင်များသည်သူ၏တံဆိပ်ချွတ်နောက်ပိုင်းတွင်အိုလံပစ်ကနေသူ့ကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
ဒီဟို Steroid တစ်မျိုးထိရောက်သောဖြစ်သက်သေပြပြီးနောက်အများဆုံးအားကစားသမားအားကစားပြုလုပ်ရန် doping အတွက်ဝတ်စုံကိုနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ သို့သော်အမေရိကန်အစိုးရကစတီရွိုက်များအသုံးပြုမှုအပေါ်ခက်ခဲဆင်းလေ၏။ ရလဒ်အနေနဲ့ကထုတ်လုပ်မှု, အသုံးပြုခြင်း, နှင့်ဤဖြည့်စွက်၏အရောင်းရဆုံးအုပ်ချုပ်ခွင့်ဥပဒေများအပေါ်ကိုတက်တင်းကျပ်။
ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကုန်ကြမ်းပုံစံတစ်ခု Off-အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲဓာတုကြောင်းသတိပြုပါ။ လူအများစုဟာရှာတွေ့ winstrol အမှုန့်အရသာ ခိုင်ခံ့စေခြင်းငှါ။
2. Winstrol ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ,
Winstrol သည့်အန်ဒရိုဂျင် receptor များအဘို့ခိုင်ခံ့စည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့အတူ heterocyclic Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပရိုတိန်း synthesize ဒါပေမယ့်လည်းကော်လာဂျင်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မယ်မသာ။ အကျိုးဆက်ကတော့ catabolic လှုပ်ရှားမှုများနောက်ပြန်ဆုတ်စဉ်မူးယစ်ဆေးပရိုတိန်း၏ဟိုတက်အမြန်နှုန်း။
ဒါဟာအခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုတိုးထွက်လာပါတယ်ဤအရပ်သည်လိင်ဟော်မုန်း Globulin binding (SHBG) အဆင့်ဆင့်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ။ နောက်ပိုင်းတွင်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟိုဂုဏ်သတ္တိများယူဆတယ်။
အသုံးအများဆုံးဟို Steroid တစ်မျိုးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့အီစထိုဂျင်ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် winstrol အီစထိုဂျင်သို့ aromatize ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်မူးယစ်ဆေးခြောက်သွေ့ Steroid တစ်မျိုး rendering, အ 3-keto အုပ်စုတစ်စုအစားထိုးခဲ့သည် A-လက်စွပ်ကြောင့်ဖြစ်ခြင်း။
၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာမီသိုင်းအုပ်စုတစ်စု၏ရှေ့မှောက်တွင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ stanozolol ၏ bioavailability တိုးပွားစေပါသည်။ အဆိုပါ winstrol ရလဒ်များကို 14 ရက်ပေါင်းအဖြစ်အစောပိုင်းအဖြစ်သိသာပါလိမ့်မည်။
3. ကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းအတွက်ထိပ်တန်း 15 Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများ
သငျသညျ winstrol ကနေအပြုသဘောအကျိုးခံစားရဖို့လိုလျှင်သင်တစ်ဦးနှင့်အတူကထည့်သွင်းသင့်ပါတယ် တသမတ်တည်းယလေ့ကျင့်ခန်း စစ်အစိုးရနှင့်ကျန်းမာသောအစားအစာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေသလောက်အတွက်ဆေးညွှန်းအောက်ပါမူးယစ်ဆေးဝါးအရေးယူမှုနှင့်တုံ့ပြန်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်တိုတောင်းတဲ့သံသရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအနေဖြင့်သင်တို့ကိုကယ်တင်မည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်။
Winstrol 1 အကျိုးပြု: အီစထိုဂျင်မွှေးကြိုင်၏သုညအန္တရာယ်များ
အဘယ်အရာကို Winstrol ရှိသမျှသည်အခြားသောဟို steroids တို့တွင်အထွက်မတ်တပ်ရပ်စေသည်ကြောင့်အီစထိုဂျင်သို့မပြောင်းပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။ အထီးအသုံးပြုသူများအတွက်, ဤသူသည်သင်တို့တစ်ကြွက်သား-တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးအတွက်ရှာလို့ရပါတယ်အထင်ရှားဆုံး feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့ကိုရှင်းပြပါရစေ။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းပြီးတာနဲ့ steroids အီစထိုဂျင်သို့ပြောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအီစထိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ socialite ရှိသည်ဖို့ဂုဏ်ယူဖြစ်လတံ့သော, သင်ဣတ္ရင်သားနှင့်အတူန်းကျင်လမ်းလျှောက်ဖို့ရှိသည်အထူးသဖြင့်လာသောအခါသာယာသောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
မွှေးကြိုင်၏သုညအန္တရာယ်များနှင့်စပ်လျဉ်းတစ်ရက်သတ်မှတ်၌သင်တို့ကိုစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုဘာမှရှိမယ့်လျှင်, က anavar ချိုမြိန် Chronicle vs winstrol ပါပဲ။ ထိုသူနှစ်ဦးစတီရွိုက်အီစထိုဂျင်ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ရေ retention ကို၏ဒိုမီနို effect ကိုပြကြဘူး။
Winstrol2အကျိုးပြု: ကြွက်သား Gain
Winstrol ပရိုတိန်း၏ဟိုပြုစုပျိုးထောင်အတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဒါဟာကြွက်သားထုထည်နှင့်ခွန်အားနှစ်ဦးစလုံးတိုးပွားလာဤအရပ်, ကတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းကြွက်သားဆဲလ်အဖြစ်အများအပြားပရိုတိန်းထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကြောင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးတိုးရန်, ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားအဆောက်အဦးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍတက်ယူရာကပို adenotriphosphate, ထုတ်လုပ်ပေးသည်။
Deca Steroid တစ်မျိုးနှင့်အချို့သောဒြပ်ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူ stanozolol ထတုတ်, သင်ဗိုင်းရပ်စ်သွားရလဒ်များကိုမီနှင့်အပြီးသင့်ရဲ့ winstrol ရပါလိမ့်မယ်။
Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများကို 3: အစွမ်းသတ္တိနှင့်ခံနိုငျရညျ
မဆိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလမယ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်သာသင့်ရဲ့ခံနိုင်ရည်တိုးမြှင်မပါဘဲကြွက်သားထုထည်တိုးပွါးသော Steroid တစ်မျိုး, အသုံးမကျကြောင်းအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ဘယ်လို stanozolol သင်၏အစွမ်းသတ္တိတိုးတက်စေသနည်း? ငါ့ကိုရှင်းပြပါရစေ။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးနီဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုကိုကြီးထွားများပြားစေ။ ဤအဆဲလ်တွေအောက်ဆီဂျင်သယ်ဆောင်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ကတည်းကကြွက်သားတစ်ဦးလည်းကြာကြာခံနိုငျရရန်လုံလောက်သောအောက်ဆီဂျင်နှင့်ခက်ခဲလေ့ကျင့်ခန်းရ။
အဆိုပါ cortisol-blocking စွမ်းရည်မှကျေးဇူးတင်ပါသည် winstrol ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါကိုကာကွယ်တားဆီးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ဘို့စတီရွိုက်အပေါ်စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်ပြိုင်ကားဂိမ်းနဲ့တူယှဉ်ပြိုင်အားကစားအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနေသောသုံးစွဲသူများဘဏ်သောဤအကြောင်းပြချက်ပါပဲ။
Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများကို 4: Bulking Cycle
တစ်ဦးကဆရာဝန်ကခက်ခဲပုံမှန်အလေးချိန်ရရှိသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားရန်ရှာတွေ့သူကိုလူနာမှ winstrol သတ်မှတ်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်ဤငါကိုဖြတ်ပြီးမထားချင်ကြောင်းအတိအကျအချက်မဟုတ်ပါဘူး။
မိန်းမတွေကအမြဲဖြစ်နိုင်သမျှအန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့်ဟိုစတီရွိုက်၏ရှင်းလင်းသောခုတ်မောင်းဖို့အကြံပေးခဲ့ကြသည်။ ပြောင်းပြန်ဒီမှာကာယဗလစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျားမဟန်ချက်နှင့်အတူအချို့သောအကြီးသိတင်းကိုကြားကြသည်။ မိန်းမတို့အဘို့ Winstrol တိုးမြှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်, elongated လိင်အင်္ဂါ, ဒါမှမဟုတ်နက်ရှိုင်းသောအသံ Chord အကြောင်းကို fussing မရှိဘဲသင်၏ပိန်ကြွက်သားမြှင့်တင်ရန်ဖို့သေချာပါသည်။
Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများကို 5: အန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု၏အနိမ့်အန္တရာယ်
Winstrol တစ်ဦးအနိမ့်-ပစ်လွှတ်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူအနည်းငယ်ဟို steroids ကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအသုံးပြုသူများကနှစ်ဦးစလုံးဆံပင်သို့မဟုတ်ဝက်ခြံများ၏အစွန်းရောက်များနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဆုံးရှုံးမှုတွေ့ကြုံခံစားဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။
သို့ရာတွင်ထိုသို့သင်တို့သည်ဤ winstrol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့်လုံးဝလုံခြုံဖြစ်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ ငါ့ကိုဒီနေရာမှာအချို့အလင်းကိုသွန်းခွင့်ပြုရန်။ တချို့ကတစ်ဦးချင်းစီကိုပင်အနည်းငယ်ထိတွေ့မှုအပေါ်အန်ဒရိုဂျင် upshots မှမျိုးရိုးဗီဇဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျဤအမြိုးအစားအောက်မှာလဲကြဘူးဆိုရငျ, ထို့နောက်မူးယစ်သင်တို့အဘို့ကောင်းစွာ augur ပါလိမ့်မယ်။
Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများကို 6: ပိန်ပုံပန်းသဏ္ဍာန် (Cycle ဖြတ်တောက်ခြင်း)
အားလုံးနီးပါးဟို steroids ကြွက်သားအုပ်စုများလည်းရှာဖွေ Install လုပ်နိင်သောအတိုင်းအတာအထိတစ်ဦး bulk အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ သင်တစ်ဦးလိုလားသူကာယဗလမယ်ဒါမှမဟုတ်ယှဉ်ပြိုင်အားကစားသမားနေလျှင်, အမြောက်အများပုံပန်းသဏ္ဌာန်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်မှု၌သင်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မည်။
winstrol နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအရာကသာပိန်ကြွက်သားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မှအသုံးပြုသူကိုကူညီပေးပါသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးတစ်သံသရာအတွင်းမှာခန္ဓာကိုယ်အဆီလျှော့ချဖို့ဖြတ်တောက်ခြင်းအဆင့်များတွင်အသုံးပြုသောဤအကြောင်းပြချက်ပါပဲ။ Primobolan နှင့်အတူကလပ် winstrol နှငျ့သငျသွေးကြောအသွင်အပြင်နှင့်အတူတစ်ခက်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။
Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများကို 7: အဘယ်သူမျှမရေ retention
ဟိုစတီရွိုက်အတွက်လက်ရှိအန်ဒရိုဂျင်ဟော်မုန်းဤအရပ်မှ, ရေကိုကိုင်ထားမှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောထားကိုဆိုဒီယမ် retention ကို၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာဖြစ်ကြသည်။ ပိုအီစထိုဂျင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းထားမည်ကို ပို. ရေဖြစ်ကြသည်။ အပြင်, ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်လှေသွေးတိုးရောဂါမှချည်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိ Diuretics ဆီးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူသာသုံး steroids ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကား stanozolol, anavar နှင့် trenbolone ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဖြစ်လျှင် Winstrol vs anavarသငျသညျနှစ်ဦးစလုံးသီးသန့်ကာယဗလသက်ရောက်မှုရှိသည်နားလည်သဘောပေါက်ချင်ပါတယ်။ သို့သော် Winnie သင်ကတခြားသုံး steroids ထက်ပိုပြီးကြွက်သားတွေကိုရရှိကူညီပေးပါမည်။
Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများကို 8: ကုထုံးကိုအသုံးပြုခြင်း
Winstrol နောက်ကွယ်မှဦးနှောက်ကြွက်သားပိန်အခြေအနေများ nursing ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအတူ Steroid တစ်မျိုးတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ stanozolol ၏အဓိကကုထုံးကိုအသုံးပြုခြင်းမျက်နှာ, လည်ချောင်း, သို့မဟုတ်လိင်အင်္ဂါ၏ဂုဏ်အကပါဝင်ပတ်သက်ရသော angioedema ၏ကုသမှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
winstrol များ၏ဆေးညွှန်းအောက်၌သင့်ကိုတင်ပါလိမ့်မယ်အခြားအခြေအနေများ decubitus အနာ, aplastic သွေးအားနည်းရောဂါ, အရိုးပွရောဂါ, fibrinolytic လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွား, ဒါမှမဟုတ်တိုးတက်မှုနှုန်းပျက်ကွက်ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် Steroid တစ်မျိုးသာ catabolic ဖြစ်စဉ်များနောက်ပြန်ဆုတ်ကစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်တိကျတဲ့ရောဂါများအတွက်အဆုံးစွန်ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါသည်။
ငါ winstrol လူသားတစ်ဦးနှင့်တိရစ္ဆာန် Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်နှစ်ဆကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းခဲ့သလား ခုသင်သိပြီ! ထိုကဲ့သို့သောမြင်းပြိုင်ပွဲအဖြစ်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တာကိုတိရိစ္ဆာန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နေသော်လည်း Winnie ကိုလည်း VET မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနွားသငယ်အတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ကြောင်နှင့်ခွေးများတွင်အများဆုံးအာဟာရမမှန်စီမံခန့်ခွဲ။
Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများကို 9: Steroid တစ်မျိုး stack အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော
၏ကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲရှိပါတယ်ပေမယ့် ဟို steroidsသငျသညျသကြားလုံးကဲ့သို့သူတို့ကိုငါတက်သီးနှံများကိုပုံမရပါဘူး။ သငျ့လျြောသော Steroid တစ်မျိုးအာမခံချက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်များကို stacking ။ သင်သည်အခြားနှင့်အတူကောင်းစွာရောက်ပြီးနှင့်မည်သို့အကောင်းဆုံးသင်သည်ထိုသူတို့ရောထွေးနှင့်ကိုက်ညီနိုင်ဖြည့်စွက်၏ရသောခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ရှိသည်အခါ, သို့သော်လုပ်ရတဲ့အတွက်လာပါတယ်။
သင်သည်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ Winstrol သီးနှံများသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ငါ့ကိုရှင်းပြခွင့်ပြုရန်။
အများစုမှာဟို steroids ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိင်ဟော်မုန်း-binding Globulin မှခညျြနှောငျပါလိမ့်မယ်။ SHBG ၏မြင့်ဆှဖှေဲ့မူးယစ်ဆေးအသုံးမကျအောင်ဤအရပ်, အသုံးပြုသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် Steroid တစ်မျိုး၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု neutralizes ။
ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် SHBG အဆင့်ဆင့်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေကတည်းကအဆိုပါကိစ္စတွင် winstrol နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျအများအပြား steroids အတူကသီးနှံများကိုပုံနှင့်နေဆဲပိန်ကြွက်သားများနှင့်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သွေးကြောပုံသဏ္ဍာန်ရရှိနိုငျသညျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင့်လျော် Winstrol ပေါင်းစပ် trenbolone, cardarine, Primobolan, andarine, anavar, ဒါမှမဟုတ် masteron ပါဝင်သည်။
testosterone လည်း stacking ကောင်းမွန်သည်သင်မူကား, မွှေးကြိုင်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်မည်ကို စိုးရိမ်. အနိမ့်ဆေးများကိုယူဖို့သေချာပါစေ။
Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများကို 10: အမြင့် Bioavailability
တစ်ဦး Steroid တစ်မျိုး၏ bioavailability အမြဲသူ့ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ stanozolol များအတွက်အထိ 24 နာရီက bioavailable စေသည်င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာမီသိုင်းအုပ်စုသည်ရှိသေး၏။ ဒါကကြွက်သား-တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးကိုဖြိုခြင်းမရှိဘဲအသည်းဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။
Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများကို 11: အုပ်ချုပ်ရေး၏အကွိမျမြားစှာနည်းလမ်းများ
သငျသညျနှုတ် winstrol ယူသို့မဟုတ်အသားထိုးဆေးမှတဆင့်နိုင်ပါတယ်။ ယင်း၏ဝက်ဘဝအကြောင်းကိုကိုးနာရီကတည်းကယခင်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အုပ်ချုပ်သည်။ ပြောင်းပြန်အဆုံးစွန်သောရှည်လျားတဲ့ဝက်ဘဝရှိပါတယ်, အရှင်, တစ်ရက်တစ်ကြိမ်ယူ။
ကျနော်တို့ကစားသုံးသူ '' အစီရင်ခံစာများအားဖြင့်သွားကြဖို့ဖြစ်လျှင်အများဆုံးအသုံးပြုသူများထိုးဆေးပုံစံကိုအကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုဖြစ်ထွန်းသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်ထိုသူတို့အားအပျော့သွားတာကိုတက်ကန်ရပါလိမ့်မယ်တအရာပင်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ဆက်ရှိနေသေးသောနာကျင်ဆေးထိုးဖြစ်ပါတယ်။
သင်အသည်းအဆိပ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုရှောင်ကွင်းလိုသလား? ထိုအခါသင်သည်ထိုးသွင်းထက်ဆေးလုံးမျိုသင့်၏။ ဆေးထိုးမှတဆင့် winstrol အသည်းထဲမှာခရီးသှားစရာမလိုဘဲတိုက်ရိုက်စောင်ရေ system ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများကို 12: အနည်းငယ်ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
ကိုယ့်ကိုအခြားဆေးကဲ့သို့ winstrol လည်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။ တိုတောင်းတဲ့ကာလသံသရာထိန်းသိမ်းနေချိန်မှာသင်ကအကြံပြု Winstrol သောက်သုံးသောကပ်လာသောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, သင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်သာတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။
ကလူကိုစက်ဆုပ်ရွံ့ရှာသောအရှိဆုံးဆီးရီးယားနဲ့အစ်စ upshots အန်ဒရိုဂျင်နှင့်အီစရိုဂျင်ဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, winstrol အနည်းဆုံးအန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပြီးအီစထိုဂျင်သို့ပြောင်းလဲမရှိအလားအလာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကဘေးကင်းလုံခြုံနေပါပြီ!
Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများကို 13: အမြိုးသမီးမြားမှအဆင်သင့်
အများစုမှာဟို steroids အန်ဒရိုဂျင်တုံ့ပြန်မှု၏မြင့်ဖြစ်နိုင်ချေကြောင့်အမျိုးသမီးအတွက် contraindicated နေကြတယ်။ အန်ဒရိုဂျင်မြင့်မား, လူဆံပင်ကျွတ်စေမည်စကားသံကိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်နက်ရှိုင်း, သင်ဂုဏ်ယူမယူပါလိမ့်မယ်တချို့သည်အခြားရယ်စရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ။
ဒါကြောင့်အဘယ်သူ၏အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နိမ့်သည်အနည်းငယ် steroids တို့တွင်ကတည်းကအဆိုပါကိစ္စတွင် stanozolol နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါအန်ဒရိုဂျင်နှင့်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် testosterone ဟော်မုန်း၏ဟိုအချိုးအကြားတစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှိုင်းယှဉ်အကြမ်းဖျင်း 10.7 မှတူညီပါလိမ့်မယ်: 1 နှင့် 1: 1 အသီးသီး။ သင်ဆဲဂျေး Cutler အဖြစ်ထွက်လှည့်ခြင်းမရှိဘဲမိန်းမတို့အဘို့ winstrol အပေါ်ဘဏ်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာနိုင်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ထိုအတန်ဖိုးများနှင့်အတူယခုသင်နားလည်ပါသည်။
Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများကို 14: တိရိစ္ဆာန် steroids
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးအတွက်, stanozolol (Winstrol / Winnie) အများအပြားကုထုံးအသုံးပြုမှုမှုအတွက်လက်မထောင်ချင်အဖြစ်ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ခြင်း။ အစပိုင်းမှာသည်ထိုးဆေးပုံစံကိုသာတိရစ္ဆာန်များအဘို့အဓိပ်ပာခဲ့သညျ။ မြင်းပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်အခြားသက်ဆိုင်ရာတိရိစ္ဆာန်ယှဉ်ပြိုင်ဘို့ doping တဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကမူးယစ်ဆေးကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
Winstrol အကျိုးကျေးဇူးများကို 15: မြန်နှုန်းနှင့်ဖျတ်လတ်သွက်လက်စေ
တစ်ဦးစိတ်ကောင်းသောအားကစားသမားသာကြွက်သားတည်ဆောက်ကာ bulk အကျိုးသက်ရောက်မှုချန်ထားမည်သည့် Steroid တစ်မျိုး, အဘို့အသွားမည်ဟုသင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, winstrol သင့်ရဲ့လုံတိုးမြှင့ဒါပေမယ့်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ရဲ့သွက်လက်နှင့်မြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးပါမည်သာ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အားကစားသမားများဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ထက်သူတို့ရဲ့ပုလ်ဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်လျှင် winstrol အကျိုးကျေးဇူးများကိုငါကျနော်တို့တစ်ခုလုံးစာအုပ်လိုအပ်ရကြလိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။ တချို့ကပိုပြီးအားသာချက်, အရိုးသိပ်သည်းဆတိုးမြှင်ပုရွတ်နှင့်အရွတ်အားပေးကာခဲယဉ်းပေမယ့်သွေးကြောအသွင်အပြင်ထုတ်လုပ်ပါဝင်သည်။
4. Winstrol သောက်သုံးသော
Winstrol သင်တစ်ဦးပါးစပ်သို့မဟုတ်ထိုးဆေးသောက်သုံးသောအကြားရှေးခယျြဖို့ဘက်စုံပေးသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး C17-aa steroids နှင့်အတူတက်ကြွစွာဟော်မုန်းအဖြစ် stanozolol ပါရှိပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်အချိန်မတိုင်မီသို့မဟုတ်အစာစားနေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပါးစပ်, stanozolol တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဆေးလုံး form မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။ winstrol တစ်ဝက်ဘဝကိုးနာရီအထိကိုတိုးချဲ့ပြီးကတည်းက, သင်က၎င်း၏ bioavailability ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်ရက်နှစ်ကြိမ်ယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါခံတွင်းထိုး 40 နှင့် 80mg အကြားကွဲပြားခြားနားသည်။ ပုံမှန် Winstrol သောက်သုံးသောထိုကဲ့သို့သောတဦးတည်းရဲ့အစတီရွိုက်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံ, သည်းခံစိတ်၏အဆင့်နှင့်သင်သည်အဘယ်သို့အောင်မြင်ရန်ချင်အဖြစ်အနည်းငယ်အချက်တွေဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ မြင့်မားထိုးနှင့်သင်၏အသည်း surprising သင်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူ aback သာယူလိမ့်မည်သတိပြုပါ။
အများဆုံးကိစ္စများတွင်ရောင်းချရန် Winstrol 10mg သို့မဟုတ် 50mg တက်ဘလက်ဖြစ်စေ၏အထုပ်ထဲမှာရရှိနိုင်ပါသည်။ အထီးအသုံးပြုသူများပိုမိုမြင့်မားထိုးဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေအောက်ပိုင်းအကွာအဝေးပေါ်ဖြစ်သင့်၏။
သူတို့ပဲ 12.5mg / နေ့၌သုံးလတစ်ကြိမ်အပိုငျးပိုငျးပွဲသို့ဆေးလုံးခွဲနိုင်ပါတယ်ကတည်းကမြင့်မားသောသောက်သုံးသောဝယ်ယူရန်ဖြစ်ပျက်တဲ့သူအမျိုးသမီးများ, အထဲကမှမထင်မှတ်သင့်ပါဘူး။ ပြောင်းပြန်အမျိုးသားတွေသူကို Winstrol ဝယ်ဖို့ 10mg နှင့်အတူဆေးပြားနေဆဲတစ်နေ့လျှင်ငါးတောင့သုံးစွဲဖို့အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ကြသည်။
Winnie တက်ဘလက်ပုံစံအတွက်ရရှိနိုင်သလောက်မှာတော့အနည်းငယ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုလည်း aqueous ပြည်နယ်အတွင်းရှိမူးယစ်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အဆိုပါအရည် milky သည်နှင့်တစ်ဦးခိုင်အရသာရှိပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျအခြို့သောအသီးဖျော်ရည်သို့မဟုတ်သင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသောက်စရာယူပြီးအားဖြင့်အရသာကြားနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျဆေးထိုးတာပိုနှစ်သက်ပါက, တစ်ခုတည်း winstrol ကာယဗလထိုးလာမယ့် 24 နာရီဘို့သင့်ကိုကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါသောက်သုံးသောသင်တစ်ဦးလိုလားသူကာယဗလမယ်, အလယ်အလတ်အသုံးပြုသူ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး starter ရှိမရှိအပေါ်မူတည် 50 နှင့် 100mg အကြားကျရောက်ပါတယ်။
5. Winstrol တစ်ဝက်ဘဝ
Winstrol တစ်ဝက်ဘဝသောက်သုံးသောတဦးတည်းရဲ့ဆည်းပူးနေအမျိုးအစားပေါ်အရင်း။ ဥပမာ, ပါးစပ်ထိုး 8-9 နာရီတစ် bioavailability ရှိပါတယ်။ ဆေးထိုးဘို့, ကာလ 24 နာရီသကဲ့သို့ရှည်လျားသည်။
6. Winstrol ထောက်လှမ်းအချိန်
Anti-doping စမ်းသပ်ထုတ်ယူသွားတတ်၏လျှင်, ထောက်လှမ်းအချိန်အသီးသီးသုံးခုနှင့်ရှစ်ပတ်ကဖြစ်ပါတယ်။2ရက်သတ္တပတ်တစ်သံသရာပြီးဆုံး - ဤနံပါတ်များမူးယစ်ဆေးခြေရာတွေ4ဝေးလည်းညှိုးနွမ်းကတည်းက winstrol တက်ကြွအားကစားသမားအကျိုးရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေကဖော်ပြသည်။
တစ်ဦးကစံ winstrol သံသရာခြောက်ပတ်အတွင်းထက်မပိုကြာရှည်ခံသည်။ သို့သော်စတီရွိုက်သုံးပြီး၏အတွေ့အကြုံကိုသူတစ်ဦးချင်းစီနေဆဲရှစ်ပတ်ကြာဦးရေအများဆုံးအဘို့ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်နှစ်ပတ်အတွင်းအဆိုပါအဆင့်၏အဆုံးရှေ့တော်၌ထိုသောက်သုံးသောလျော့ချကြောင်းပညာရှိဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေး Steroid တစ်မျိုး stack များအတွက်အခန်းကအရွက်သော်လည်း, သငျသညျ C17-aa steroids အတူကြောင့်မသုံးသင့်ပါတယ်။
အမြိုးသမီးမြား 10mg / နေ့၏နေ့စဉ်ထိုးထိန်းသိမ်းရန်သင့်ပါတယ်သွားရမည်အကြောင်း, အထီးကာယဗလ 50mg / နေ့ပျမ်းမျှယူသင့်၏။ သို့သော်လိုလားသူသည်အသုံးပြုသူများမှသာသံသရာ၏နောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းတစ်နေ့လျှင် 100mg လုပ်နိုင်ပါတယ်။
8. Winstrol Post ကို Cycle ကုသမှု
winstrol သံသရာ၏အဆုံးမှာ, သင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဟော်မုန်းဖိနှိပ်မှုပြုခြင်းအချို့ကုထုံးကိုခံယူသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်စေမယ့်သင်ပုံမှန် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုစတင်ရန်သို့မဟုတ်သင်ခြောက်လပတ်အတွင်းကာလအတွင်းရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ကြွက်သားဆုံးရှုံးတက်အဆုံးသတ်ကန်။ testosterone ဟော်မုန်းများ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ကိုသင်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်အားနည်းခံစားစေမည်။
9. ဘယ်လို Long ကဒါဟာ Winstrol ရလဒ်များကိုကြည့်ပါရန်ကိုယူပါသလား
Stanozolol သငျသညျသစ်ကိုသံသရာဝင်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်တာစတင်သည်။ သို့သော်မြင်နိုင်အပြောင်းအလဲများကိုဒုတိယပတ်အတွင်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ 14 ရက်ပေါင်းအားဖြင့်, ထိုစဉ်ကတည်းကတစ်ဦးအပြုံးနှင့်အတူသွားမှန်ထဲကနေလမ်းလျှောက်ရန်သေချာစေပါ မီနှင့်အပြီး winstrol ပုံရိပ်တွေသင်သည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီကြွက်သား Enhancer တိုင်းအသုံးပြုသူမှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်များကိုအာမမခံကြောင်းသတိရပါ။ တစ်ဝမ်းခွဲ, ကြွက်သားများနှင့်ဖျက်စီးရမဲ့ကောင်များအတွက်, သင်သည်သင်၏အစားအစာ, အာဟာရနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းစစ်အစိုးရအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ဤတွင်6အတွင်းမျှော်လင့်သောအရာကိုအပေါ်တစ်ဦးပြိုကွဲမယ့် - 8 ရက်သတ္တပတ်သံသရာ;
1 observable အပြောင်းအလဲများပေမယ့်ခန္ဓာကိုယ်အချို့အပိုရေအလေးချိန်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မည်မဟုတျ
6 သေးငယ်တဲ့ tummy နှင့်တိုးမြှင်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူကောင်းပြီ-defined ကြွက်သားအသွင်အပြင်
winstrol ကာယဗလရလဒ်များကိုခံစားရန်မည်သို့အချို့ takeaway အကြံပေးချက်များထုတ်စစ်ဆေး;
အဆိုပါ McDonalds ဘာဂါနှင့်ထို appetizing ချိုမြိန်, sugary, ဒါမှမဟုတ်ဖက်တီးအစားအစာများကိုတက်ဖြတ်သွား
ရေ copious ပမာဏနှင့်သင်၏အသည်းအံ့သြသွားလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်
ထိုကဲ့သို့သော Citrus အသီးအပွအဖြစ်ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုယူ
သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းစစ်အစိုးရအပေါ် cardio လေ့ကျင့်ခန်း Include
10 ။ ဘုံ Winstrol ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
Winstrol သုံးပြီး၏အကျိုးဆက်များကိုလူတစ်ဦးကနေဟော်မုန်းကွဲပြားမှုမှလာမည့်ကြောင့်မှကွဲပြားခြားနားသည်။ ဟို steroids ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြုံနေရသည်သေခြင်းကဲ့သို့သေချာပင်ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်သင်ကသောက်သုံးသောကျော်လွန်ကာတိုတောင်းသောသံသရာအဘို့အသွားမအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ပို့စ်သံသရာဇာတ်စင်စဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့် testosterone ဖိနှိပ်မှု
တစ်ခုဆိုးလက်စထရောအဆင့်အတွက်တိုးလာဤအရပ်, လေဖြတ်သို့မဟုတ်နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုများ၏အန္တရာယ်များကိုတက် spiking
အချိန်မတန်မီ epiphyseal ရငျ့
11 ။ Winstrol ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုကိုရှောင်ရှားဖို့ကိုဘယ်လို
သင်၏နှလုံးကျန်းမာဖြစ်ပါတယ်ရင်တောင်တချို့မကြာခဏစစ်ဆေးမှုများ-ups လုပ်ပေးရန်သေချာစေပါ။ တဦးတည်းကိုပိုမိုအရေးကြီးသောခြေလှမ်းသင့်ရဲ့အစားအစာအတွက်ကောင်းသော HDL လက်စထရောနှင့်အတူသတ္တုဓာတ်ထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, ငါး, ဆီဒီ winstrol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်ဖြည့်စွက်အကြားဖြစ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်
testosterone ဟော်မုန်း၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ကဒီဟော်မုန်း၏သဘာဝထုတ်လုပ်မှုပိတ်ပစ်ဖြစ်ပါတယ်အခါ post ကိုသံသရာကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်သေချာလမ်းသံသရာ၏နောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းအချို့သော testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်အပါအဝင်ဖွငျ့ဖွစျသညျ။
TUDCA, Liv အဘိဓါန်-52, NAC, ဒါမှမဟုတ်နို့ဆူးပင်များကဲ့သို့ဖြည့်စွက်သင့်ရဲ့အသည်း၏အကာအကွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Post ကိုသံသရာကုသမှု (ရာခိုင်နှုန်း)
အများအားဖြင့်, အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်များနှင့်အခြားအတုဟော်မုန်း2ယူပါလိမ့်မယ် -3ရက်သတ္တပတ်သင့် system အတွက်ရှင်းလင်းဖို့။ ဤကာလအတွင်း, သင်သည်သင်၏ဟော်မုန်းအဆင့်ကို offset နှင့်တည်ငြိမ်မှမူးယစ်ကုထုံးဖြတ်သန်းသွားသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Nolvadex သို့မဟုတ် clomid ဖြစ်စေသုံးပြီး testosterone ဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုပြန်ပေးမည်။
12 ။ Winstrol Contraindications
လေ့လာရေး steroids သန္ဓေသားပုလ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါပြသ
ဆီးကျိတ်နဲ့ရင်သားကင်ဆာ carcinoma ၏သားကောင်များ
စတီရွိုက်မှ hypersensitivity နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ
13 ။ ဘယ္လို Winstrol အွန်လိုင်း Buy
အများစုမှာပြည်နယ်ဟိုစတီရွိုက်၏အသုံးပြုမှုကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့ကြသည်။ သငျသညျ၎င်းငျး၏အသုံးပြုမှုကိုတရားဝင်ကြသူအခြားနိုင်ငံများမှသို့ရွှေ့မဟုတ်လျှင်ဒါကြောင့်ရောင်းချရန် winstrol တွေ့ရှိရန်ခက်ခဲသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အမေရိကန်, သြစတြေးလျ, ဗြိတိန်နှင့်ကနေဒါကပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုနိုင်သည်, သို့မဟုတ်မဆို Steroid တစ်မျိုးဖြန့်ဝေဖို့ပညတ်တိကမျြးဆန့်ကျင်သည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးမှသာဆရာဝန်တစ်ဦးမှမှန်ကန်သောဆေးညွှန်းနှင့်အတူခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြောင့်ကြောင့်သမုတ်သောအဆိုပါကန့်သတ်ခြင်း, winstrol သာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည် အနက်ရောင်စျေးကွက်။ အဆိုပါလျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ဈေးကတဆင့်, သင်မူရင်းထုတ်ကုန်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အနည်းငယ်မျှသာအခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်တို့အဘို့အရှာနေတာမရပေမယ့်အဲဒီမှာနိုင်ပါတယ်။
Winnie ၏ထိုးဆေးပုံစံတစ်ခု aqueous ပြည်နယ်အတွက်ဖြစ်ပါသည်, ဥပမာ, ယူပါ။ ကစင်ကြယ်ခြင်းနှင့်မြုံပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထုတ်လုပ်နေသည်ဘဲနေလျှင်, ဖြေရှင်းချက်ပိုးမွှားများနှင့်ရောဂါကူးစက်မှုဖွယ်ရှိထဲ၌တည်လိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင်ကတရားဝင်ဓာတ်ခွဲခန်းရှာဖွေခြင်းတစ်ခုအစပျိုးလုပ်သင့်၏။
Winstrol အွန်လိုင်း Buy
အရည်အသွေးမြင့်လူ့-တန်း stanozolol ဝယ်ယူရန်တစ်ခုတည်းသောသေချာလမ်းအွန်လိုင်းစျေးဝယ်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျ Steroid တစ်မျိုးတားမြစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လျော့နည်းဂရုစိုက်တဲ့သူကတခြားပြည်နယ်များအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုဝယ်ခြင်းငှါသွားကြပြီနိုင်ကြောင်း, သို့သော်ဤရှုပ်ထွေးခံရဖို့ပုံရသည်။ မက္ကစီကို, ဥပမာ, ဟိုစတီရွိုက်၏အသုံးပြုမှုကိုအုပ်ချုပ်ဥပဒေများ၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများဒီတော့အားလုံးသဘောကျကြသည်။
14 ။ Winstrol Powder ကြော်
Winstrol အမှုန့် 1g 5g
190 သက်သေပြချက်ကောက်ပဲသီးနှံအရက် 31.2ml -
တံစို့ 300 7.5ml -
ပေါင်းခံရည်ကိုရေ - 62.5ml
Benzyl အရက် - 3ml (3%)
McMullin, GM က။ , Smith က C. , Watkins, GT ကို။ , Scurr, JH ။ သွေးပြန်ကြောမလုံလောက်သောများ၏ကုသမှုအတွက် Stanozolol နှင့်အတူ Fibrinolytic စွမ်းရည်မြှင့်များ၏ထိရောက်မှု, ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၏သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်ဂျာနယ်ဧပြီလ 1991 ။
Kicman, AT, ဟို Steroid တစ်မျိုး၏ဆေးဝါးဗေဒ, ဆေးဝါးဗေဒဗြိတိသျှဂျာနယ်, PMC 2439524, အွန်လိုင်း, 2018
Falanga, V. , Greenberg, AS, Zhou, အယ်လ်, et al ။ , ထိုဟို steroids Stanozolol အားဖြင့် Collagen Synthesis ၏စိတ်ကြွဆေး, NCBI ဆောင်းပါးများ, အွန်လိုင်း, ဒီဇင်ဘာလ 1998
ဘိတ် PC, Millward, DJ သမား, Chew, LF, အ Rat အတွက်ကြီးထွားမှုနှင့်ပရိုတိန်းဇီဝြဖစ်ပေါ်ဟို steroids Stanazolol ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, PubMed ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း, အွန်လိုင်း, စက်တင်ဘာလ 1987
11023 Views စာ
ဝက်ခြံများအတွက်ကုန်ကြမ်း Isotretinoin (Accutane): Isotretinoin နှင့်အတူဝက်ခြံကုသခြင်း
Oxymetholone ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: Oxymetholone ၏ Ultimate လမ်းညွှန် (Anadrol) ကာယဗလ, သောက်သုံးသောနှင့်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Proviron (Mesterolone)